हेर्दै जाउ! - Blogs of Sagar Prasai
१२ कक्षा पास गरेपछि मैले ईन्जिनियरिङ्ग पढ्नलाई एउटा प्रसिद्ध ईन्जिनियरिङ्ग कलेजमा प्रवेश परिक्षा दिएँ। नतिजा आउँदा उच्च अंक नआएको भएपनि पैसा तिरेर पढ्न मिल्ने गरी मेरो नाम निस्कियो। तर जब म भर्ना गर्नका लागी त्यो कलेज पुगेँ- त्यहाँका सबैजना मलाई व्हिलचियरमा देखेर छक्क परे। अझ भनौँ आँत्तिए- अब कसरी यो मान्छेलाई पढाउने भनेर। त्यो कलेजका अग्ला सिढिँमा मेरो व्हिलचियर हिड्न सक्दैन थियो। उनीहरूले मलाई त्यहाँ नपढाउन खोजे। तर मैले पनि हार मानिन- त्रिभुवन विश्वविद्यालय देखी शिक्षा मन्त्रालय सबै तिर पुगेर भने- मैले त्यहाँ पढ्न पाउनुपर्छ। कलेज र मेरो सानो-सानो खालको घम्सा घम्सी नै पर्यो।
त्यहि क्रममा त्यस कलेजका सहायक प्रिन्सिपलले मलाई भेट्न बोलाउनुभयो र भन्नुभयो- "भाई, हेर्नोस- तपाईलाई टेक्निकल बिषय पढ्न गार्हो हुन्छ। मेरो सल्लाह मान्नुस- तपाई साईन्स नै नपढ्नुस। आर्ट्स पढ्नुस्। लिट्रेचर पढ्नुस। घरमै बसेर पढ्न नि सजिलो हुन्छ।" सहायक प्रिन्सिपल सरले मलाई मेरो कलेजमा नपढ भन्नुभयो- त्यो कुराले मलाई दुख लाग्यो। तर त्यो भन्दा पनि दुख यो कुराले लाग्यो कि वहाँ मैले के पढ्न सक्छु वा सक्दिन भन्ने निर्णय आफै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आर्ट्स वा लिट्रेचर नराम्रा बिषय हैनन् तर ती बिषय पढ्ने कि अरू कुनै त्यो नितान्त मेरो रोजाई हुनुपर्ने थियो। मलाई अब त्यस कलेज सँग मन मर्यो।
त्यसपछि म त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएँ। बिएस्सी फिजिक्स पढेँ। सजिलो त भएन तर साथीहरूको सहयोग र शिक्षकहरूको कोअपरेसनले मैले प्रथम श्रेणीमै बिएस्सी पास गरेँ। बिएस्सी पढिरहेकै समयमा म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारका लागी पनि अग्रसर भएँ। कसैले पनि अपाङ्गताका कारणले मैले जसरी शिक्षा वा अन्य कुनै अवसरबाट बन्चित हुन नपरोस् भनेर धेरै ठाउँ बोलेँ- लेखेँ। यहि कारणले मेरो सानो भएपनि पहिचान भयो- अलि अलि मान्छेहरूले चिन्न थाले।
यहि क्रममा स्नातक पढिसके पछि एकदिन एउटा कार्यक्रममा ती सहायक प्रिन्सीपल सर सँग मेरो भेट भयो। वहाँ र म दुवै जना त्यस कार्यक्रमका वक्ता थियौँ। वहाँले मलाई चिन्नुभयो र सोध्नुभयो-"आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ?"। मैले यो पुरै समयमा मनमा कुन्ठा परेर बसेको गुनासो लाई फुकाउँदै भने- "सर मैले फिजिक्स पढेँ। ७२% ल्याएर पास भएँ।" वहाँले त्यो बेला केहि भन्नुभयो वा भएन- मलाई अहिले याद छैन। तर मलाई यो याद छ- खुशीले हो या दुखले; मेरा आँखा त्यो बेला भरिएका थिए।
मलाई यो घटनाले सिकाएको कुरा- हामीलाई जिन्दगी धेरै मान्छेले तिमीले त्यो त गर्नै सक्दैनौ भन्नेछन्। केहि कुरा सुरू गर्न लाग्नुस्- यस्तो त गर्नै सकिदैन नि भन्न दश जना आईपुग्छन्। ती मान्छेसँग नरिसाउनुस्। बरू उनीहरूको अनुहासमा हेर्नुस्, हल्का मुस्कुराउनुस् र भन्नुस्- हेर्दै जाउ!